mubvunzo Canary Islands.
5 mwedzi 1 vhiki yapfuura #1239 by josmor
Ini ndakangotora Canary Islands software 1 uye 2. Asi ndinoongorora kuti migumisiro inoratidzwa muvhidhiyo inoshanda chete naReX 2.0. Ndatsvaga paInternet, uye ini handina kuzviwana. Ndingakwanisa sei kuwana mabudiro akanaka eCanary Islands?
5 mwedzi 1 vhiki yapfuura #1240 by Dariussssss
Iyi inzvimbo isina kukodzera kuisa matambudziko aunayo nemu sim. Ndapota chengetedza dambudziko iri pasi paro iri nyaya, kana iri FSX kana P3D.
Tichaita zvose zvatinokwanisa kuti tikubatsire kunze.
Time chokusika peji: 0.240 mumasekonzi